Bandhig Dhaqan oo ay ka qeyb galeen masuuliyiin dowladda ka tirsan oo Muqdisho lagu qabtay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa ka qeyb galay bandhig dhaqameed lagu xoojinayay horumarinta hidaha iyo dhaqanka oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho
Hobollada Waaberi ayaa bandhiggaan uga qeyb qaatay ciyaaro hiddadaha iyo dhaqanka ah iyo sugaan, ayadoo sidoo kale ka qeyb galayaasha la waydiiyay su’aalo dhaqanka la xiriira oo lagu bixinayay abaalmarin.
Gudoomiyaha hay’ada wacyi galinta bulshada Maxamed Ibrahim Cajiib oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in kulamada noocaan ah ay muhiim u yihiin bulshada SOomaaliyeed, xiligaan oo ay jiraan xaalado aan wanaagsanay n oo soo wahajay dhaqanka dadka, kuwaas oo u baahan in wacyigelin joogto ah laga sameeyo.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka iyo ciyaaraha si loo tageero nabadda. Wuxuu sidoo kale sheegay in kulamada noocaan ah ay wax badan ku soo kordhinayaan bulshada.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo wasiiru dowlaha maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii ka qeyb galay bandhiggan, waxayna dhammaantood sheegeen in muhiimad weyn ay bulshada u leedahay in kulamo noocaan ah loo qabto.
Wasiirka wasaarada warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeya oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay waqti badan ku bixineyso adkeynta iyo soo nooleynta dhaqanka Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in dhaqanku uu ka mid yahay waxyaabaha lama taabtaanka ah ee ay leedahay umadda Soomaaliyeed.
Sawir Qaade:- Muuse Cisnaam Abtow
dhageyso barnaamijka bandhiga wareysiyada ee Radio Muqdisho 06 04 2015